केटाहरुको कपाल काट्ने केटी, छोटो समयमै मालामाल ! – दर्पण छायाँ
मुख्य पृष्ठअर्थ/बाणिज्यकेटाहरुको कपाल काट्ने केटी, छोटो समयमै मालामाल !
Admin | २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २०:४३	Comments
यही सहरको भीडमा आज बिजशालाले स्थानीय समाजमा फरक पहिचान बनाएकी अलिक फरक पात्रलाई उभ्याउने प्रयास गरेको छ । यो स्टोरी केही गर्न चाहने हरेक युवाहरुका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । कपाल काट्ने व्यवसाय अक्सर केटाहरुले गर्ने गर्छन् । तर, एउटी केटीले समाजमा चलिआएको चलनलाई तोड्दै केटाहरुको कपाल काटी राम्रो व्यवसायिक सफलता हात पारेको रोचक स्टोरी हो–सामपरी सलुन एण्ड स्पाकी सञ्चालक सम्झना परियारको ।
फरक व्यवसाय गरेको छोटो समयमै सफलताको सिँढी उक्लिरहेकी उनलाई धरानमा सम्झना परियारभन्दा पनि ‘सामपरी’को नामले चिन्नेहरु धेरै छन् । २६ वर्षीया परियार धरान १७ की स्थायी बासिन्दा हुन् । उनले १२ कक्षा मात्र अध्ययन गरेकी छिन् भने उनको नयाँ उद्यम भने निकै लोभलाग्दो र रोचक छ । उनी धरानमा हेयर स्टाइलिष्ट र मोडलका रुपमा समेत चिनिन्छन् ।
व्यवसाय नयाँ ढंगले गरे छोटो समयमै छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने एक आत्माविश्वासी महिला उद्यमीको परिचय समेत उनले बनाएकी छिन् । निरन्तरको लगन र केही फरक काम गर्ने पृथक शैलीका कारण सामपरीको सैलुन व्यवसायले फड्को मारिरहेको छ ।
आकर्षक जीउडाल र मृदुभाषी सामपरी आत्मविश्वासी पनि छिन् । उनमा रंगकर्ममा केही गर्ने विशेष सौख छ । कोरियोग्राफर ललित राईले सैलुन खोल्न प्रोत्साहन गरेको सामपरीले बताइन् । आफूले सिकेको सीपलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाएको र केटीले केटाहरुको कपाल काट्दा त्यस्तो व्यवसाय चल्नसक्ने जस्तो देखेर सामपरी सलुन एण्डा स्पा खोलेको उनको भनाइ छ ।
सात लाख नगद र बैंकबाट ८ लाख ऋण काढेर सैलुन व्यवसाय थालेकी उनले आफूले धेरै कमाउन नसकेता पनि धराने र पूर्वमा विभिन्न कार्यक्रममा आउने सेलिब्रेटीहरुको अपार माया पाइरहेको सुनाइन् । ‘सुरुमा केटाको कपाल काट्ने सैलुन खोलेकोमा धेरैले आश्चर्य व्यक्त गर्थे ।’ उनले भनिन्–‘केटीले कपाल काट्ने ठाउँ छ रे भन्दै अचम्म मान्दै कपाल काट्नैका लागि इटहरी र बिराटनगरबाट समेत ग्राहक आउथे ।’
कपाल काटेको ३ सय रुपैयाँ लिने गरेकी उनले दैनिक २५ जनासम्मको कपाल काट्ने गर्छिन् । उसो त उनले ३ जना महिलाहरुलाई रोजगारी समेत दिएकी छिन् । उनको सैलुनमा केटासँगै केटीको समेत कपाल काट्ने भएकाले अरुलाई समेत रोजगारी दिएको उनी बताउँछिन् । सुरुवातीताका अचम्भित तरिकाले हेर्ने र शंकालु तरिकाले सोच्ने गरेका मानिसहरु अहिले सामान्य रुपमा नेपाली समाजले स्वीकार गरिसकेको सामपरीमा फुटबल खेलाडी, राष्ट्रिय सेलिब्रेटी, बैंकर र युवाहरु नै ग्राहक बनेर जाने गरेका छन् ।
छोरी मान्छेले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने समाजको गलत मान्यतालाई तोड्ने चाहनाले नै केटाहरुको कपाल काट्ने सैलुन खोलेर समाजमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको उनले बिजशालासँग बताइन । धरानस्थित सिद्धार्थ बैंकका शाखा प्रबन्धक समेत रहेका सामपरीका नियमित सेवाग्राही दीपक थापाका अनुसार सलुनमा राम्रो सेवासुविधा रहेको र युवा उद्यमीको रुपमा सामपरीले उदाहरणीय काम गरेकी छिन् ।
भारतमा हुँदा नै सैलुन खोल्ने सोंच बनाएकी सामपरी सुरुवाती ४/५ महिना घाटामा व्यवसाय चलाउनु परेता पनि त्यसपछि भने सलुन घाटामा छैन । गत असोजमा सामपरीले १ वर्षको सक्सेस पार्टीमा हेयर एण्ड फेसन शो समेत गर्न भ्याइसकेकी छिन् । पूर्वाञ्चलमै केटाको कपाल काट्ने महिला हेयर डिजाइनरको रुपमा आफू पहिलो पात्र भएको उनको दाबी छ ।
गतवर्ष १ दिने महिला फुटबल टुर्नामेन्टमा स्पोन्सर गर्न पाउँदा जिन्दगीकै खुशीको अविष्मरणीय क्षण रहेको उनले सम्झिइन् । आफूले गरेको आम्दानीको केही हिस्सा समाजसेवामा समेत लगाउने सोंच रहेको सामपरीले बताइन् । आफ्नो सैलुनको फ्रेञ्चाइजे खोल्ने र फिल्ममा कलाकार हुने योजना समेत रहेको उनले सुनाइन् ।
आफूले चाहेको काम गरे सफल हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेकी सामपरी केटाले गर्ने काम पनि केटीले गर्नसक्छन र केटाले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोंच हटाउनुपर्ने धारणा राख्छिन् । जीवन अत्यन्तै सुन्दर बनाउनमा आफ्नै हात हुने भएकाले भरपूर आनन्दले जीवन बिताउने आफ्नो उद्देश्य रहेको समेत उनले बताइन । कमाउन र बाँच्नकैका लागि खाडीको तातो घाममा रगतपसिना बगाउन तयार युवाहरुले पनि सामपरीले झै फरक सोची कुनै न कुनै व्यवसाय संचालन गर्न सके सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को परिकल्पना पूरा हुन होस्टेमा हैसै हुने थियो ।
“दु’र्घटनामा परेरमा, शिक्षक शर्माको कैलाश खोलामा अ’न्तिम दा’हासंस्कार गरियो” २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २०:४३
पाकेट मा’रेको आ’रोपमा अभिनेत्री रुपा प’क्राउ’ २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २०:४३
जन्ती बो’केको टिपर दु’र्घटना : दुई ज’नाको ज्या’न गयो, २४ जना घा’इते २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २०:४३
म्यादी प्रहरीको तलब ३० हजार माथि, १ लाख मात्रै भर्ना लिन अर्थको अनुमति २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २०:४३